Products – Page4– FinePrint
Hands of Stone 2016 Spanish Gummybear Torrent Download
Central Intelligence 2016 movie torrent download
Street Fighter2Download Torrent
60 Seconds! v1 Windows XP/7/8 download
Hari Bahadur060₨
गाउँबाट सहर–दरबारमा ल्याइएको यस्तो ठिटो जसका क्रियाकलाप व्यक्तिगत भईकन पनि सामाजिक–राजनीतिक बनेका छन् । सहरमा, गाउँमा, राजनीतिमा, समग्रमा समाजमा उसले गर्ने बिठ्याइँ र चतु¥याइँ, जाल र झेल, कल्पना र बिलौना यस्ता छन्, लाग्छ— समकालीन राजनीतिमाझैं उपन्यासमा पनि नायक र प्रतिनायक दुवै उही हो । उपन्यास ‘एचटूओ’ हो, जसमा ‘एच–हास्य’ दुई र ‘ओ–ओखती’ एक छ, यस्तो ओखती जो तीतो तर कामलाग्दो छ । सजिलो भाषाशैलीमा लेखिएको यो रसिलो उपन्यास हाम्रो समाजको तथ्य नजिकको सुन्दर कथ्य हो ।
Hari Bahadur by: Haribansha Acharya
इन्द्रजाल’ सामाजिक तथा राजनीतिक विषयका कथाहरूको सङ्ग्रह हो । नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देखिएका विसङ्गतिलाई रोचक र गम्मीर किसिमले दर्शाउन सक्नु सङ्ग्रहको मुख्य विशेषता हो । पुस्तकमा राजधानी र यसवरपरको काँठदेखि हिमाल र तराईसम्मको परिवेश, पात्र र सम्बन्धहरूको सङ्कटलाई प्राञ्जल भाषा र कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नारायण ढकाल सुपरिचित नेपाली आख्यानकार हुन् । कविता, निबन्ध, माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्रमा हात चलाएका उनी राजनीतिक टिप्पणीकारका रूपमा पनि चर्चित छन् । उनका तीन उपन्यास, चार कथा सङ्ग्रह, दुई बालकथा सङ्ग्रह र दुई निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित छन् । उनका विचारोत्तेजक निबन्धहरूको सँगालो ‘शोकमग्न यात्री’ फाइनप्रिन्टबाट प्रकाशित छ ।
Indrajaal by: Narayan Dhakal
नेपाली आख्यान साहित्यको कथा क्षेत्रमा अविचल उभिएका महेशविक्रम शाहका कथामा नेपाली सामाजिक–सांस्कृतिक चित्र, आञ्चलिक स्वाद, ग्रामीण द्वन्द्वको घाउ झल्किन्छ । सटाहा सङ्ग्रहमार्फत नेपाली कथासाहित्यमा उदाएका शाहका ‘सिपाहीकी स्वास्नी’, ‘अफ्रिकन अमिगो’, ‘छापामारको छोरा’े र ‘काठमाडौंमा कामरेड’ कथासङ्ग्रहमा नेपाली माटो तथा विदेशी पृष्ठभूमिका कथाहरु समेटिएका छन् । तर उनको छैटौं कथासङ्ग्रह ज्याक्सन हाइटले भने अलि फरक स्वाद दिएको छ पाठकलाई । सङ्ग्रहका सबै कथाको सिर्जनभूमि विदेशी परिवेश भए पनि नेपाली डायस्पोरामा आधारित उनका हरेक कथामा कुनै न कुनै रुपमा नेपाली मनका दुःख, वेदना र पीडाहरु समेटिएका छन् । ‘ज्याक्सन हाइट’मार्पmत विदेशमा रहेका नेपालीको धुकधुकी छाम्न पुगेका शाहले नेपाली मन र विदेशी पृष्ठभूमिलाई राम्ररी सम्बोधन गरेका छन् ।
महेश विक्रम शाह कथाकार तथा प्रहरी अधिकृत हुन् । उनका ‘अफ्रिगन अमिगो’, ‘सिपाहीकी स्वास्नी’, र ‘काठमान्डुमा कामरेड’ कथा संग्रहहरु प्रकाशित छन् । ‘छापामारको छोरो’ को लागि उनले मदन पुरस्कार पाएका छन् ।
Jackson Height by: Mahesh Bikram Shah
शरीर, मन र आत्मा मिलेर बन्छ— जिन्दगी । यी तङ्खवका आआफ्नै लक्ष्य छन् । शरीरको लक्ष्य हो, सुख । मनको शान्ति अनि आत्माको आनन्द । शरीरको सुख, मनको शान्ति र आत्माको आनन्द— यी तीन पुँजी जीवनरुपी त्रिवेणीमा कुनै व्यक्ति समाहित हुन पाए उसले सत्यं शिवं सुन्दरम्को ।।।माल’ पाउँछ; सत्–चित्–आनन्दको ।।।माला’ लगाउँछ । अर्थात् उसको जिन्दगी साँच्चिकै ।।।मालामाल’ हुन्छ । यही मालामाल जिन्दगी नै रिल्याक्स जिन्दगी हो । अर्थात् भित्र आनन्दले भरिपूर्ण र बाहिरबाट सुन्दर जिन्दगी ।
Jindagi, Relax Please! by: Dr. Raju Adhikari
बिनिता बराल मोडल, नायिका तथा कृषि व्यवसायी हुन् । उनले “चपली हाइट” लगायत चारवटा फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । अहिले उनी अमेरिकाको हरजिङ विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् “जुइनो” उनको पहिलो उपन्यास हो ।
Juino by: Binita Baral
“मान्छेले जे बाँच्यो त्यो जीवन होइन, बरू यसबारे अरुलाई के बताइन्छ, कसरी बताइन्छ भन्ने चाहिँ जीवन हो ।” गाब्रियल गार्सिया मार्खेजको यो बोली मानसिकतामा टाँसेर आफ्नो अतीत, आ फ्नो कथालाई कलात्मक शैलीमा वर्णन गरेकी छ उपन्यासकी प्रमुख पात्र कायाले । सिद्धान्त र वादहरुका सस्त्र नभिरेकी कायाजस्ती काँतर नारीको पनि बेजोड कथा हुँदोरैछ । उसले चट्टानजस्तो हैन पानीजस्तो जीवन भोगी । परिस्थिति र परिबन्दले जस्तो जस्तो भाँडोमा राखे, त्यस्तै त्यस्तै आकार बनिदिई । प्रेमका लागि धेरै सङ्घर्ष गरी । तर उसलाई प्रेमले सधैं धोका दिइरह्यो, नियतिले सधैं हराइरह्यो । त्यही हारको कथा हो— कायाकल्प ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी स्टाफ नर्स कल्पना बान्तवाका कथा, कविता, निबन्ध तथा संस्मरण कान्तिपुर, नागरिक आदि अखबारमा प्रकाशित छन् । ‘कायाकल्प’ उनको पहिलो उपन्यास हो ।
Kaayakalpa by: Kalpana Bantawa
छोराको आँखाबाट पिताको सङ्घर्ष देखाउने उपन्यास हो कर्नाली ब्लुज । सानो छँदा आफ्ना पितालाई संसारकै सबभन्दा ज्ञानी र बलवान् ठान्ने छोराले आफ्नो हुर्काइसँगै आफ्ना पिताबारे धारणाहरु फेर्दै जान्छ । उपन्यासको कथा सुदूर तराईको गाउँ मटेरादेखि कटासे बजार हुँदै पहाड कालिकोटसम्म गाँसिन्छ । चन्द्रे, ममता दिदी, भागीराम, बाटु, शिवशङ्कर, सद्धाम, एकराज, जरीलाल, मन्दिरे र छोट्कु जस्ता फरक परिवेश र फरक समाजका पात्रले उपन्यासको कथा गाँस्दै लैजान्छन् । उपन्यासमा बाल्यकालका बिठ्याँइहरु छन्, र छन् फरकफरक पात्रका मन छुने कथाहरु । उपन्यासमा कैयौं दृश्य हास्यप्रधान छन् त कैयौं ह्दय छुने ।
बुद्धिसागर सशक्त कवि तथा उपन्यासकार हुन् । उनको ‘बुद्धिसागरका कविता’ संग्रह प्रकाशित छ भने दोस्रो उपन्यास ‘फिरफिरे’ हो ।
Karnali Blues by: Buddhisagar
“डरसित भिड, बाँच त आँखा फारेर । जहाँ नजर थोडै झुकिगो त सम्झ, तिम्रो खून सफेद भइहाल्यो । याद राख्नू, डरले तिमीलाई पूरा मान्छे हुनबाट रोक्छ ।”
०६४ भदौ १० मा बम विस्फोट गर्ने उद्देश्यले घुर्ना राम अर्थात् ‘प्यान्थर’ काठमाडौं आउँछ । मधेस जनतान्त्रिक सेना र दलित प्यान्थर मोर्चाको सहकार्यमा हुने यो विस्फोट विगतका भन्दा भयानक हुँदै छ ।
तर जुन उद्देश्यका लागि घुर्नाले यत्रो जोखिम लिँदै छ, त्यसको परिणाम भोग्न ऊ साँच्चै तयार छ ? जोसँग मिलेर ऊ बम वस्फोट गर्न जाँदै छ, के उनीहरुमा पूरै भर पर्न सक्छ ?
बम विस्फोटको योजना जतिजति अघि बढ्छ, घुर्ना रामदेखि ‘प्यान्थर’सम्मको रुपान्तरणका पत्र एकएक खुल्दै आउँछन् । तर उसलाई थाहा छैन, भविष्यतिर अघि बढिराखेका पाइलालाई आनै विगतले पछ्याउँदै आइराखेको । बम विस्फोटको दिन घुर्नाको जिन्दगीको नयाँ सुरुवात हुनेछ वा अन्तिम ?
काठमाडौंमा एक दिन त्यही दिनको कथा हो ।
KATHMANDUMA EK DIN by: Shivani Singh Tharu
दुईचार वर्ष खाडीतिर काम गरेर घरको ऋण तिर्ने, घरमा एउटा कोठा थप्ने, अनि श्रीमतीको पेटमा हुर्कंदै गरेको बच्चाको लालनपालनलाई चाहिने पैसा कमाएर घर फर्कने— नजिबको सपना यत्ति हो । खाडी जाने उसको सपना पूरा त हुन्छ, तर दुर्भाग्यले उसलाई पुर्याउँछ अनकन्टार साउदी मरूभूमिको बाख्रा फार्ममा । त्यहीँ सुरू हुन्छ उसको बँधुवा मजदुर दैनिकी । आफ्नो घरगाउँ, परिवारको सम्झना दबाएर उराठ मरूभूमिमा खुला आकाशलाई घर र बाख्रालाई आफन्त मान्नु उसको नियति बन्छ । अन्ततः त्यस नियतिबाट उम्कन उसले तय गर्छ एउटा कष्टकर यात्रा । नजिबको जीवन–प्रेम, ईश्वर–आस्था र आत्मविश्वास झिनामसिना ठक्करमा पनि हरेस खानेहरुका लागि प्रेरणा हुन सक्छ ।
Khabuj by: Benyamin
ठ्याक्कै परिभाषित गर्न सकिन्न । आत्मकथा, संस्मरण र निबन्धको बीचैबीच यसरी बग्छ, खुसी । मानौं, कुनै पहाडी खोला मैदान हुँदै समुद्रमा विलीन भएको प्रक्रिया हो । संस्मरण भनेको आत्मरतिको पुलिन्दा मात्र होइन भन्ने लेखकले पुस्तको सुरुआत नै आफ्नो अत्यधिक मदिरापानको लतबाट गरेका छन् । यो पुस्तकमा राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरु मात्र छैनन् । साधारण ठानिएका असाधारण पात्र पनि छन् । पैसा, शक्ति र यौनको दुनियालाई लेखकले यसरी केलाएका छन्, पढ्नेहरू छक्क पर्न सक्छन् । घरघरमा हुने अभिभावक–सन्तान तनाव पृष्ठभूमिका लेखिएका अंश पढेर धेरैका आँखा रसाउनेछन् । कतै पाठक मुस्कुराउनेछन् । चमकदार गद्य र तिक्खर सूक्तिले भरिपूर्ण यो पुस्तक विजय कुमारको जीवन चियाउने एउटा आँखीभ्mयाल पनि हो । यसमा अध्यात्म छुट्ने कुरै भएन । पढेपछि सजिलै बिर्सन नसकिने खालको पुस्तक हो यो । आखिर जीवनमा खुसीको खोज कसलाई पो नहोला र !
विजय कुमार बहुचर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘दिशानिर्देश’का प्रस्तोता हुन् । नेपाल साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक रहेका उनी स्तम्भकार पनि हुन् ।